Mitokona ny mpandraharaha ny oniversite Antsiranana noho ny tsy fandraisan'izy ireo karama sy mahakasika ny ECD. Toherin’izy ireo ihany koa ny kinamanamana amin’ny fanomezana tombontsoa ny mpiasa. Mitaky ny fialan’ny DAAF ireo mpiasa mitokona. (Jereo Sary Tohiny)
Efa tsy misy bedy intsony fa dia alaina toy ny matsaka rano ny solika ety amin'ny toby famarotana solika eto Antalaha, indrindra eto amin'ny Jovena, izay solombavambahoaka mihitsy no tompony. Milahatra ary dia miandry ireo mpameno amin'ny bidon mavo ny rehetra vao mety ahazo anjara solika ho vidiana. Dia gaboraraka tanteraka, manjaka ny varomaizina ho an'ireo tsy mahavita milahatra. (Jereo Sary Tohiny)
Nisaotra ireo rehetra nisafidy azy i Feno Harison, kandida tsy miankina tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra. Tamin’ny tambazotra sosialy facebook no nanaovany fanambarana androany. « Amin’ny maha-teknisiana ny tenako », hoy izy no nisafidianan’ny olona azy. Nanipika mazava i Feno Harison fa tena ambany ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy tamin’iny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina notanterahina ny alarobia 27 novambra 2019 iny ary « marobe ny lesoka amin’ny fifidianana ». (Jereo Sary Tohiny)
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny facebook i Guy Rivo Randrianarisoa, androany, milaza fa « Resy aho teto Antsirabe raha ny vokatra vonjimaika. Izaho manaja ny vokatra sy ny feom-bahoaka na inona na inona zava-miseho » Notsiahiviny fa « fitiavako hanarina ity tananantsika ity no nilatsahako ary izay hampandroso azy no faniriako », ka isaorany ireo rehetra nifidy sy nanampy azy. « Mionona sy miandry zavatra hafa ny ankamaroan’ireo mpiaradia amintsika ary tsy marisika amin'ny fifidianana intsony », hoy hatrany ny fanambaran’ity kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara, tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto Antsirabe renivohitry ny Faritra Vakinankaratra ity. Mirary soa ny mponin’Antsirabe hahazo zava-tsoa ny tenany. « Izaho moa efa niverina eto ary efa manana orinasa eto koa dia miaraka eto foana isika », hoy i Guy Rivo Randrianarisoa namarana ny teniny. (Jereo Sary Tohiny)
Nosakanana tsy handatsa-bato teto Ambohimanaiky i Rakotomaharavo Lucien, Ben’ny tanàna amin’ny anaran’ny antoko Tia Tanindrazana ato amin’ny Kaominina ambanivohitra Mahazoarivo, Distrikan’i Fandriana, Faritra Amoron’i Mania. Ny lehiben’ny Fokontany, sady filohan’ny birao fandatsaham-bato no mbola mpanohana kandida Ben’ny tanàna no nibahana ny tsy hanatontosan’ity kandida Ben’ny tanàna Rakotomaharavo Lucien ity ny latsa-bato androany, teo anatrehan’ny lefitra faharoan’ny lehiben’ny Distrikan’i Fandriana. Fokontany iray ato anatin’ny Kaominina Mahazoarivo i Ambohimanaiky. Ny lalàna mifehy ny fifidianana dia mamela ny kandida handatsa-bato amin’ny birao fandatsaham-bato ao anatin’ny fari-pifidianana irotsahany hofidiana ; tsy nohajaina anefa izany. Milaza ny tsy hipetra-potsiny amin’izao ny kandida, fa hitondra ny raharaha amin’ny ambaratongam-pahefana misahana ny fifidianana. (Jereo Sary Tohiny)
Tsy lisi-pifidianana nampiasaina tamin’ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin’ny volana mey 2019 no tao amin’ny EPP Andrefan’Ambohijanahary, Boriborintany faha-4 Antananarivo Renivohitra. Olona nandatsa-bato tao amin’ny BV n°1 tamin’ny volana mey, nafindra any amin’ny BV n°4, ary niova sady diso ny anarany. « Rakotovazaha » nanjary « Rakotocazaha », nefa ny laharana kara-panondro sy ny kara-pifidianana tsy niova, izany hoe namerina nanao "saisie" indray izany, nefa ny lisitra efa nakatona tsy kasikasihina intsony. Novaina ny lisi-pifidianana satria nisy olona tonga nifidy tamin’ny volana mey, nefa nanjavona tsotra izao tao anaty lisi-pifidianana raha tonga hifidy androany maraina. Tsy tranga iray na roa fa maromaro no sendra io tranga io.
Notanterahina manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara androany alarobia 27 novambra 2019 ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolotsain’ny tanàna amin’ireo Kaominina miisa 1695 eto Madagasikara. Nisokatra tamin’ny 6ora maraina ny Biraom-pifidianana, ary nikatona tamin’ny 5ora hariva. Efa manomboka manisa vato ankehitriny ireo biraom-pifidianana, raha hita fa tsy navitrika nandeha nifidy ireo mpifidy.
Mbola tsy ampy taona ny efa-bavy, ary 22 taona ny zokiny indrindra amin’ireto mpanendaka ireto. Zaza roa, 6 taona sy 8 taona, niaraka tamin’ny Renibeny avy namonjy fiangonana ny Alahady teo no nendahin’izy ireo raha niditra elakelan-trano teny amin’ny faritry ny CEG 67ha iny. Lasan’izy ireo ny kitapon’ireo zaza. Nikiakiaka mafy anefa ireto zaza ireto, ary nisy ny olona manodidina no naheno izany ka nivoaka avy hatrany. Vao nahita ireo olona nivoaka ireto ankizivavy dia nirifatra nandositra avy hatrany, saingy voasambotry ny Fokonolona ny iray, ary natolotr’izy ireo ny Polisin’ny boriborintany fahafito etsy 67ha. Nanao ny fanadihadiana ny Polisy ka ny ampitson’io Alahady io dia voasambotra tany an-tranony tsirairay avy ireto ankizy vavy ireto. Efa tsy misy mianatra avokoa izy dimy vavy. Misy efa manan-janaka ary tsy misy miasa avokoa. (Jereo Sary Tohiny)
Tovolahy iray, manodidina ny 20 taona, no maty tsy tra-drano main’ny herinaratra ny alahady 17 novambra 2019, tokony ho tamin’ny 4 ora tolakandro. Tany an-tsaha, naka hazo tao Ambodisatrana II izy sy ireo namany, ary an-dalana hody no tra-doza ; nikasoka tamin’ny taribin’ny Jirama mitondra herinaratra mahery vaika, izay somary mikirazorazo ka maty tsy tra-drano. Nampandre ny olona tany an-tanàna sy ny manampahefana ity loza ireo namany niara-dia taminy. Tonga ny avy amin’ny Jirama sy ny Zandary ary koa ny mpitsabo nanamarina ny fisian’ny loza. (Jereo Sary Tohiny)